Igbe kachasị mma na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Rayson etolitela ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọkachamara na onye na-eweta ihe a pụrụ ịdabere na ngwaahịa dị elu. Na usoro mmepụta ahụ dum, anyị na-eme ka usoro njikwa usoro nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị guzobere, anyị na-agbaso oge niile, njikwa sayensị, na ndozi na-aga n'ihu, ma na-enye ọrụ dị mma iji zute na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa ngwaahịa ngwaahịa kachasị mma ọ bụla ga-ewetara gị ọtụtụ uru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnata nyocha gị. Rayslọ ọrụ kacha mma boys nwere otu ọrụ ọrụ maka ịza ajụjụ ndị ahịa juru na ya ma ọ bụ ekwentị, na-ejikwa ndị ahịa na-edozi nsogbu ọ bụla. Ma ị ga - achọ inweta ozi ndị ọzọ, kedu ihe anyị ga - eme, nwalee ngwaahịa ọhụrụ anyị - ọ ga - amasị gị ị nụ maka gị, ọ ga - amasị gị ịnụ olu a . Ha bụ usoro akwụkwọ na-eme, ịkwadebe akwa (ịsacha (draịvintre na nje na-eguzogide), nbanye, akwa, na ịkwa akwa, na ịkwa akwa.